Vaovao - Ahoana ny fomba hisafidianana sary mihetsika azo afenina?
Ahoana ny fomba hisafidianana sary mitsivalana miafina miafina?
Nisy ny mpanjifa nanontany ahy ny fomba hisafidianana ilay slide drawer ambanin'ny tany mety? Androany dia hampahafantariko izay karazana fiantsonan'ny drawer undermount ananantsika.
Ny hardware Geriss dia misy karazan-tsary hafa miafina. Ho an'ny antsipiriany azonao tsidihina https://www.yangli-sh.com/undermount-drawer-slides/
Safidio ny mety amin'ny anao ambanin'ny vatasarihana sary, dia tsy maintsy fantatrao ny halalin'ny vatasarihanao ambany hisafidianana ny halavan'ny slide ambany Ary arakaraky ny kabinetra vatasarihana ataonao ao anaty habakabaka hisafidianana ireo sary mihetsika fonosana miafina. Satria nafenin'i Geriss ireo mpihazakazaka vatasarihana araka ny takian'ny mpanjifa samihafa mba hampiasana slide ho an'ny tabilao 16mm na 19mm. Ny mpanjifa sasany dia hanontany hoe inona ny solaitrabe 16mm na 19mm? Jereo eto ambany ny sary:
Max 16 = tabilao 16mm
Max 19 = tabilao 19mm
Araka ny sary aseho dia azonao atao ny mahita ny Max 19 ny vatasarihana anaty ka hatramin'ny kabinetra ao anaty elanelana dia 25mm. Ho an'ny Max 16, ny vatasarihana ao anaty mankany amin'ny kabinetra ao anaty elanelana dia 21mm.
Rehefa vita dia safidio ireo mpihazakazaka drawer ambany habe marina. Azonao atao ny mifanaraka amin'ny zavatra takinao mba hisafidianana ny undermount drawer glides functions. Ireo mpihazakazaka Geriss undermount dia manana Slide Close Extension Extension Concealed Drawer Slide, Push To Open Full Extension Concealed Drawer Slide, Soft Close Single Extension Concealed Drawer Slide, Single Extension Push Hanokatra Eo ambanin'ny Slide Drawer Mount. Ny fiasa rehetra azonao atao dia misafidy mampiasa visy azo ovaina na fitaovana fanidiana eo aloha.
Geriss koa dia manana sary mihetsika ambanin'ny vatasarihana ampiasaina amin'ny kabinetra endrika na kabinetra tsy misy rafitra afaka misafidy.
Sarin'ny kabinetra ao an-dakozia ao anaty lakozia tsy afa-mihetsika
Ny kabinetra ao an-dakozia tsy misy endriny dia mihazakazaka ny mpihazakazaka drawer
Fampahalalana bebe kokoa, tongasoa eto handefasana fanadihadiana aminay.